यसकारण खाइन्छ साउन १५ मा खीर « Mero LifeStyle
यसकारण खाइन्छ साउन १५ मा खीर
मेरो लाइफस्टाइल	|| 30 July, 2021
डा.वासुदेव कृष्ण शास्त्री
साउनमा दुध नखानु, भदौमा दही र माघ महिनामा मोही नखानु भन्ने एउटा मान्यता थियो । दूध खान नभए पनि दूधबाट बनेका परिकारहरु खान हुन्छ भन्ने चलन पनि थियो । त्यसैले, दूध, घिउ प्रशस्त पाइने साउन महिनामा जाडो र वर्षे कामको थकानबाट बच्न खीर खाने चलन पहिलेदेखि कै हो ।
प्राचीन कालमा धानलाई नै दुधमा मज्जाले पकाइन्थ्यो । धान राम्ररी पाकेपछि त्यसबाट रस र धानको छोक्रालाई छुट्टाएर त्यही रसलाई खाने गरिन्थ्यो । पछि त्यो चलन हटेर चामलको खीर खाने प्रचलन सुरु भयो ।
असार १५ मा दही चिउरा, माघे संक्रन्तीमा खिचडी तरुल जस्तै हरेक साउन १५ गते खीर खाने नेपाली संस्कारको चलन चल्ती छ । कृषि प्रधानदेश नेपालमा खीर चलनचल्तीमा रहेको एउटा मिष्ठान्न परिकार हो । धेरै जसो चाड पर्व र उत्सवमा खीर पकाएर भोज गर्ने चलन पनि छ ।
असार १५ मा दही चिउरा, माघे संक्रन्तीमा खिचडी तरुल जस्तै हरेक साउन १५ गते खीर खाने नेपाली संस्कारको चलन चल्ती छ ।
साउन महिना शिवपुजन महिना भएकाले एक महिनासम्म माछा–मासु नखाएर शिवभक्तहरूले भगवान् शिवको पूजा गर्ने गर्दछन् । वर्षाको समयमा विभिन्न सङ्क्रमण रोग हुन्छ र खीरले त्यसबाट बचाउन सहयोग गर्छ । खीरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दछ । जसको कारण साउन महिना दूध तथा दूधबाट बनेका पोसिला परिकार खाने चलन छ ।
खीरलाई स्वादिष्ट बनाउन मरीच, ल्वाङ, सुकमेलगायत मरमसलाका साथै सखर पनि हालिन्छ । यसरी बनाइको खीर शक्तिबद्र्धक हुनुका साथै रोगनिवारक पनि हुन्छ । हाम्रो मानव शरीरलाई चाहिने पोषकतत्व पूर्ति गर्न र समय अनुसार आहारको स्वाद लिन नेपाली समाजमा थरीथरीका परिकार खाने चलन पहिलेदेखिनै छ । त्यही चलन अन्तर्गत साउन १५ मा खीर खाइन्छ ।
#डा.वासुदेव कृष्ण शास्त्री
यसकारण हेरिन्छ कुशे औंशीमा बुबाको मुख « Mero LifeStyle
[…] कुशै औंशीका दिन पिताको भौतिक उपस्थिती हुने छोराछोरीले उहाँ मुख हेरेर मिठाई, फलफूल, कपडा आदि उपहार दिने र परदेशमा हुने छोराछोरीले फोनबाटै पनि कुरा गर्दछन् । बढ्दो आधुनिकतासँगै बुबा आमाहरुलाई बृद्धाश्रममा राख्ने, समय र श्रोतका अभावमा हेला गर्ने अनि झर्को फर्को मान्ने चलनहरु बढिरहेको छ । तर, बुबालाई हेला गर्ने र चित्त नपुर्याउने कर्म जगतलाई पक्कै मान्य छैन । हामी पनि एकदिन बुबा या आमा हुन्छौँ तसर्थ हामीले जे गर्छाैं त्यही नै आफ्ना भावी सन्ततीबाट प्राप्त गर्दछौं । आउँदा पुस्ताहरुमा पनि पितृमोहका भावना अझ प्रगाढ पार्न आजका पुस्ताले पितृप्रतिको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने महत्व र आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ ।(संस्कृतिविद् डा. गुरुप्रसाद सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )यो पनि पढ्नुहोस् :लाखे ब्युताउँदै नयाँ पुस्ता (तस्बिर कथा)करिश्मा भन्छिन्– ‘तीज गीतको आत्मा सबैले कायम गर्नुपर्छ’ (भिडियोसहित)किन बस्ने साउने सोमबारको व्रत ? यस्तो छ कारणसाउनमा हरियो, पहेँलो चुरा र मेहन्दी किन लगाइन्छ ?असार १५ मा दही चिउरा किन खाइन्छ ?यसकारण खाइन्छ साउन १५ मा खीर […]
जनैपूर्णिमामा जनै लगाउनु र क्वाँटी खानुको यस्तो छ महत्व « Mero LifeStyle
[…] (यो लेख विष्णुप्रसाद पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित छ, उनी वेद विद्याश्रम गौशालाका प्राचार्य हुन् ।)यो पनि पढ्नुहोस्असार १५ मा दही चिउरा किन खाइन्छ ?यसकारण खाइन्छ साउन १५ मा खीर […]